Sphinx တောရိုင်း | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! Sphinx တောရိုင်း | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပေါ်လာသမျှသောရှေးဟောင်းအရာအွန်လိုင်းဗီဒီယို slot နှစ်ခုအဘို့ကြီးစွာသော storyline အောင်. ဤအချိန်ကဖနျတီးဖို့ IGT ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်ဖာရောဘုရင်သည်နှင့်အတူဝှက်ထားရှေးဟောင်းအီဂျစ်နက်နဲသောအရာနှင့်စည်းစိမ်ရှိ၏ Sphinx တောရိုင်း.
IGT သာလွန်အရည်အသွေးကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ထောက်ပံ့ထားပြီး, အချို့သောအချိန်များအတွက်ကမ္ဘာအနှံ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဂိမ်းယခု. ဤ ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ် slot ကာစီနို ဂိမ်းကိုလည်းသူတို့အနေဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်.
ရှိပါတယ်5ရက်ကြောင့်မှားယွင်းခြင်းနှင့် 40 ဤသည်၌ paylines ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ် slot ကာစီနို သငျသညျလှည့်ဖျားနှုန်း 40p သကဲ့သို့အနညျးငယျနှငျ့အတူဘုရင် join လို့ရပါတယ်ဘယ်မှာ slot က. ဒီများအတွက်အများဆုံးလောင်းကြေး ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ် slot ကာစီနို ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် 400 လှည့်ဖျားမှ. ပိရမစ်, စွန်ပလွံပင်, နှင့်သဲကိုနောက်ခံထားပြီးဖြည့်စွက်. အဆိုပါအနိမ့်တန်ဖိုးကိုဖဲချပ်ဝေကတ်များနှင့်ရုပ်၌ပြစ်မှားမိက high-တန်ဖိုးကို icon များ reels ပေါ်သင်္ကေတများဖြစ်ကြသည်. ထိုသူတို့တွင်အမြင့်ဆုံးပေးဆောင်အိုင်ကွန် Bastet ဖြစ်ပါသည်, ခွေးဘုရား. သူတို့ထဲကငါးလေယာဉ်ဆင်းသက်သင်ရလိမ့်မယ် 250 ဒင်္ဂါးပြားပေးချေမှု.
ဒီ၏အခြားအင်္ဂါရပ်များ ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ် slot ကာစီနို ဂိမ်းပါဝင်သည်:
တောရိုင်းပတျဝနျးကငျြ- အဆိုပါ Tutankhamun သေခြင်းတရားမျက်နှာဖုံးရိုင်းအိုင်ကွန်နှင့်အထိသင်ရနိုင် 1,000 ဒင်္ဂါးပြား. က reels အပေါ်နိုင်သည့်အခါ, ကပတ်ဝန်းကျင်တောရိုင်းအင်္ဂါရပ် activated. မျက်နှာဖုံးန်းကျင်အားလုံးကတခြား icon များလည်းကိုတောသို့လှည့်. ဆယ်ပါးသင်္ကေတကဒီမှာရိုင်းသို့လှည့်များနှင့်မြင့်မားသောအကြိုးခိုင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်.
အခမဲ့လှည့်ဖျား- ဒီ feature သုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသဲကန္တာရမြင်ကွင်းကြဲဖြန့် icon များလာပြီခြင်းဖြင့် activated ဖြစ်ပါတယ်. သုံး, လေး, ဤအအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေအထွက်နှုန်း၏သို့မဟုတ်ငါး 3, 10, သို့မဟုတ် 25 အဆသင့်ရဲ့အလောင်းအစား. သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးချင်းစီအမျိုးအစားအခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီးတိုးပွားစေ၏လေးခုပေါင်းစပ်ခြင်းမှရှေးခယျြရ.
30 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ, 1 ကြိမ်မြှောက်ကိန်း
15 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ,2ကြိမ်မြှောက်ကိန်း
10 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ,3ကြိမ်မြှောက်ကိန်း
7 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ,5ကြိမ်မြှောက်ကိန်း
40 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ, 1 ကြိမ်မြှောက်ကိန်း
20 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ,2ကြိမ်မြှောက်ကိန်း
15 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ,3ကြိမ်မြှောက်ကိန်း
9 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ,5ကြိမ်မြှောက်ကိန်း
60 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ, 1 ကြိမ်မြှောက်ကိန်း
30 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ,2ကြိမ်မြှောက်ကိန်း
20 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ,3ကြိမ်မြှောက်ကိန်း
14 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ,5ကြိမ်မြှောက်ကိန်း
သင်တို့သည်လည်းဆင်းသက်အားဖြင့်အင်္ဂါရပ် retrigger နိုင်ပါတယ်3အဆိုပါအင်္ဂါရပ်မှထွက်ကစားခံရသောအခါသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ. အခမဲ့လှည့်ခြင်းများအရေအတွက်ပင်ကဲ့သို့မြင့်မားတဲ့သွားနိုင်ပါတယ် 600 ဒီဖုန်းဘီလ် slot ကာစီနိုဂိမ်းထဲမှာ.
ဒါဟာ အွန်လိုင်းမှ slot ကသို့မြေယာ-based လောင်းကစားရုံဂိမ်း၏အခြားအောင်မြင်သောအကူးအပြောင်းဖြစ်တယ်. ဤသည် slot ကဆုကြေးငွေ features တွေအများအပြားပါဝင်ပါတယ်မှာကစားနိုင်ပါတယ် ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ် slot ကာစီနို.